Diyopost.com :: छत्रमानको आत्मकथामा लाजमर्दो स्वीकृति ‘दाइजोबापत कार लिएँ’ छत्रमानको आत्मकथामा लाजमर्दो स्वीकृति ‘दाइजोबापत कार लिएँ’ - Diyopost.com
काठमाडौं, ८ साउन । ‘मिनबहादुरजीले आफ्ना सम्धीलाई यो कार प्रिजेन्ट गर्न लाग्नु भएको छ, सम्धीले मलाई कारको साँचोको बट्टा प्रदान गर्नुभयो । मैले धन्यवाद दिएँ ।’
आफूले ‘दाइजो’ बापत कार लिएकोमा धन्यवाद दिने यी व्यक्ति कुनै सामान्य नागरिक होईनन् । नेपाली सेनाका पूर्व प्रधानसेनापति छत्रमान गुरुङले लखेको आत्मकथा ‘जनताको छोरो’मा उल्लेखित यो अंश निकै विवादास्पद छ ।
‘घुस लिनु वा दिनु दुबै अपराध हो’ भने जस्तै दाइजो लिनु वा दिनु दुवै अपराध हो । नेपालको संविधानले पनि दाइजोलाई एउटा कु–प्रथाको रुपमा व्याख्या गरेको छ । दाइजो जस्ता कु–प्रथाको अन्त्य गर्न राज्यले करोडौं रुपैयाँ खर्च गरिरहेकै छ । तर, राज्यको जिम्मेवार निकायमा रहिसकेको व्यक्तिले खुलेआम आफूले दाइजो लिएको सार्वजनिक गरेका छन् ।
त्यसो त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत भड्कीलो विवाह गर्न प्रतिबन्ध गरेको छ । तर, कानुन र नियम भनेको सर्वसाधारणलाई मात्रै हो । ठूला मान्छेहरुका लागि कहाँ कानुन र नियम लाग्छ र ?
पूर्व प्रधानसेनापति छत्रमान गुरुङका कान्छा छोराको विहेमा आफूले दाइजो बापत मर्सिडिज बेन्ज कार लिएको आफैले लाजमर्दो रुपमा आफ्नै आत्मकथामा खुलाएका छन् ।
‘२५ गते अपरान्ह चार पन्ध्रमा दुलही अन्माउने कार्यक्रम अनुसार जन्ति तथा अन्य सबै जम्मा भए । एक ठाउँमा पछिल्लो मोडलको मर्सिडिज बेन्च कार पनि सजाएर राखिएको थियो,’ कान्छा छोराको विहे प्रसंगलाई सम्झाउँदै उनले आफ्नो आत्मकथामा लेखेका छन्,‘मेरो साइँला जेठान बज्र गुरुङले कार निरै सबैलाई जम्मा गर्नुभयो र उद्घोष गर्नुभयो,‘मिनबहादुर जीले आफ्ना सम्धीलाई यो कार प्रिजेन्ट गर्न लाग्नु भएको छ, सम्धीले मलाई कारको साँचोको बट्टा प्रदान गर्नुभयो ।’
भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक मिनबहादुर गुरुङले छत्रमानलाई दाइजोमा कार दिएका थिए । त्यतिबेला छोराको विहेमा आएको उक्त कारमा अहिलेपनि छत्रमान सयर गर्नेगर्छन् ।
छत्रमान भन्छन्, ‘चोरेको होईन,ठगेको होईन’
मेरो छोराको विहेमा मलाई यो कार प्रेजेन्ट आएको हो । म अहिलेपनि यो कार चढ्ने गरेको छु । मेरो सम्धीले सारा संसारले देख्ने गरी दिएको हो । पछि मेरो गाडी हुँदैन भनेर उहाँले गाडी दिनुभएको हो । उहाँ धनी मान्छे उहाँको कमाईबाट दिएको हो । मैले कमाएको होईन । तपाईं भन्दिनुस्, विनोद चौधरीले सम्धीलाई केही दिन मिल्दैन ? उहाँले आधिकारीक कमाएको सम्पत्ति मध्येबाट दिनुभएको हो । त्यही त्यही गाडी चढेर प्रधानमन्त्री चढेर प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको छु । लोकमानलाई भेटेको छु । मैले चोरेको होईन, ठगेको होईन । म लुकाउने मान्छे होईन ।
नेपाली सेनाका पूर्व प्रधानसेनापति गुरुङद्वारा लिखित आत्मकथा केही महिना अघि बजारम आएको थियो ।
उनको आत्मकथा आए लगत्तै रक्षा मन्त्रालयले अवकास प्राप्त सेनाका प्रमुखहरुलाई आत्मकथामा जथाभावी नलेख्न निर्देशन दिएकाे थियाे ।